पछिल्लो चार्ज पछि एक UI 3.0 | बाट ब्याट्री प्रयोग समय Androidsis
हामीले एन्ड्रोइडमा देखेका थोरै बुझ्न सकिने परिवर्तनहरू मध्ये एक हो ब्याट्री प्रयोग समयको प्रदर्शनमा परिवर्तन। र त्यो हो एक UI 3.0 मा अन्तिम चार्ज देखि ब्याट्री को उपयोग समय फर्काउँछ.
मेरो अर्थ, यो कसरी सधै थियो र यसले हामीलाई हाम्रो मोबाईलमा कति घण्टा भयो भनेर थाहा पाउन हामीले यसलाई पुन: चार्ज नगरुञ्जेल सम्म अनुमति दियो। एक महान् नवीनता जुन धेरैले नदेखीएको छ, तर त्यो दिन प्रति दिनको आधारमा हामीलाई अझ राम्रोसँग हाम्रो मोबाइल कसरी ह्यान्डल गरिन्छ भनेर मूल्या assess्कन गर्न अनुमति दिन्छ।
मा वर्तमान Android संस्करणको ब्याट्री जीवन दिन द्वारा प्रदर्शित हुन्छ। त्यो हो, पर्दाको समय घण्टा बारहरूको साथ दर्साइएको हुन्छ जुन हामीलाई तुलना गर्न अनुमति दिन बुझिन्छ। तर जब धक्का आउँछ, वास्तवमा हामीले मोबाइल चार्ज गरेको पछिल्लो घण्टा थाहा पाउनको शक्ति लगभग हाम्रो आँखाबाट लिएको छ।
एक UI २. Bat मा ब्याट्री प्रदर्शन
हामी प्रदान गरिएका छविहरूमा देख्न सक्छौं, बाँकी घण्टा प्रतिशत राशिको साथ देखा पर्दछ हामीले छोडेको ब्याट्रीको। त्यसोभए हामी कसरी फर्कनेछौं जुन यो पहिले युआई 3.0.। र मा थियो जस मध्ये हामी पहिले नै यसको उपन्यास को विशाल हिस्सा थाहा छ.
El समुद्र परिवर्तन त्यो ब्याट्री दृश्यमा निहित छ र ब्याट्री सेटिंग्स बाट समय संग यसको व्यवहार, र यसले हामीलाई "ब्याट्री प्रयोग" प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ।
una त्यो भन्दा पहिले सामसु Samsung राम्ररी बुझिसकेको थियो जस्तो देखिन्छ गुगलले एन्ड्रोइडलाई कसरी बुझ्छ भनेर जान्नको लागि कहिलेकाँही यसले हामीलाई परिवर्तन गर्दछ। तपाईंलाई थाहा छ, यदि तपाईं अग्रिममा कस्टम लेयर चाहनुहुन्छ र एन्ड्रोइड अनुभवमा राम्रोसँग तय गर्न चाहनुहुन्छ भने, सामसु जहिले पनि यसको एक यूआईको साथ रहनेछ, र पनि ese २. तेस्रो-पार्टी सुरुवातकर्ताहरूमा इशाराहरू अनुमति दिन.
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » हाम्रो बारेमा » एक यूआई 3.0. In मा ब्याट्री प्रयोग समय पछिल्लो चार्ज पछि (अन्तिम) फिर्ती
सबै कोडहरू सक्षम गर्न र अक्षम गर्न को लागी Movistar तपाईंको आफ्नै स्मार्टफोनबाट कल फर्वार्डिंग।